Global Voices teny Malagasy » Ny Fahamarinana Sy Ireo Vokany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Mey 2018 11:54 GMT 1	 · Mpanoratra Elijah Zarwan Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Lehilahy efa zokinjokiny miaraka amin'ireo talkies-walkies (mamerina indray ny fehezantenin'i Issandr … azony ny talenta ), no mivezivezy manerana ny lalambe. Tato ho ato, mandeha mankao amin'ny Sendikan'ny Gazety fotsiny aho rehefa misy zavatra mitranga mihoa-pefy mitranga, noho izany tsy fantatro raha eo mandritra ny fotoana rehetra ireo fiarabe sy ireo olona miaraka amin'ny talkie-walkie ireo. Tamin'io alina io, ny endrika vinitr'ireo mpitandro filaminana manetsiketsika ireo sakana manodidina ny Sendika no nanaitra ny saiko toy ny fanehoana tsara ny endriky ny governemanta manoloana ny fahalalahana maneho hevitra… ary izay mihitsy no nanaovana azy.
Raha vao tonga aho, olona anjatonjatony no nivangongo tao anatin'ny efitrano fihainona, nijery horonantsary fanadihadiana novokarin'ny Al-Jazeera vao haingana mikasika ireo blaogera Ejiptiana. Ireo peta-drindrina miantso ny famotsorana an'i Alaa  sy ny famoahana ireo hafa voafonja no manemitra ireo varavaran'ilay efitra. Koa ity ny fahatsapako faharoa: Olona anjatonjatony no ato anatin'ny efitrano fihainoana an'ny Sendikan'ny Gazety, mijery horonantsary fanadihadiana an'ny Al-Jazeera mikasika ireo blaogera ary eo am-pihomehezana sy mihomehy foana. Rehefa nanadihady voalohany an'i Wael Abbas  aho tamin'ny taona lasa, nitaraina izy fa tsy nomen'ny Sendika ho an'ireo mpanao gazety anaty tambajotra ny ora tamin'iny andro iny. Amin'izao fotoana izao ny fampahalalan-baovao mpanohitra eo an-toerana, Al-Jazeera, Deutsche Welle , Time  Magazine, The Washington Post , Politiken, Die Welt, sy ny Liberation dia manao “ny tantaran'ny blaogera Ejiptiana” ary mikarakara hetsika iray feno ry zareo Sendikan'ny Gazety. Al-dostour, mpiseho isankerinandro, no manangona nandritra ny herinandro ireo lahatsoratra amin'ny blaogy Ejiptiana. Niova tokoa ny fotoana.
Tena ratsy ny hoe nila andiana fanagadrana vao afaka nanova azy ireo. Marina, efa tsinjo tamin'ny fahavaratra lasa iny sy tamin'ny fararano ny zava-mahaliana ireo media, saingy sarotra tamiko ny nanangona mpanao gazety maherin'ny 300 tamin'ny Vovonana Erantany ho an'ny Orinasa Fampahalalambavao, natao tamin'ny Novambra tao Tunis mba handinihana ny fanagadrana  an'i Abd al-Karim Suleiman noho ny fanoratana fanohintohinana iray, fa tsy heloka bevava, lahatsoratra teo amin'ny blaoginy. Nanadihady an'i Abd al-Karim i Al-Jazeera taorian'ny fahafahany ary nanaraka an'i Alaa sy Malek  raha teny am-pizaràna ireo boky kely fampielezankevitra teo amin'ny kianjan'i Tahrir izy ireo, nony avy teo tafapetraka teo ambonin'ireo sary izy ireo mandrapaha-voasambotra an'i Malek sy Alaa. Na dia ilaina aza ny fandresena lahatra nataon'i Wael Abbas hitondra azy ireo hanaparitaka an'io zavatra tsy manjary io.
Ny alina manaraka, ireo sora-baventy sy ireo takelaka feno soratsoratra miantso ny famoahana ireo mpanao fihetsiketsehana nogadraina, ka anisan'izany ireo blaogera, no nifanesy manoloana ny efitrano fihainoana an'ny Sendikan'ireo mpisolovava, izay nihaonan'ireo laika mpikatroka sy solontenan'ireo Rahalahy Miozolomana ary ny antoko silamo voarara “Al-Amal” mba hiady hevitra mikasika ny tetikady hahatongavana amin'ireo tanjona iraisana. Tao anatin'ny zaridaina tao ambadiky ny Sendika, niarahaba an'ireo namana izay tsy hitany nandritra ny iray volana mahery ireo mpikatroka vao avy nahazo fahafahana. Nandray anjara tamin'ny fampisehoana fohy teo am-bavahady ny sasantsasany tamin'izy ireo. Araka ny fomba fitondra natao an'i Mohammed al-Sharqawi , izay blaogera ihany koa, rehefa niverina tamin'ny fihetsiketsehana izy ireo ny 25 May fotoana fohy taorian'ny nivoahana ny fonja, nilàna fahasahiana izany. Ary marina tokoa, saika ireo rehetra nandray fitenenana teny an-dampihazo dia nanonona ny anaran'i Al-Sharqawi sy Alaa  avokoa.
Manohy manao fanentanana ho an'ny fanovàna, amin'ny tambajotra sy eny andalam-be ireo blaogera vao avy nafahana. Ashraf Ibrahim— nogadraina tamin'ny taona 2003 noho ny fandefasana tamin'ny hafatra elektronika ho an'ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona, ireo sary sy ireo tatitra mikasika ny herisetra nataon'ireo mpitandro filaminana tamin'ireo fikambanana nanao hetsipanoherana manohitra ny ady any Iraka, nony avy eo indray tamin'ny 27 Aprily 2006, noho ny nandray anjara tamina fihetsiketsehana iray manohana ny fahaleovantenan'ny fitsaràna sy ireo fifidianana madio – nandeha tany amin'ny paositry ny mpitandro filaminana tamin'ny herinandro lasa teo, tapa-kevitra handeha mivantana any amin'ny fivorian'ny Sendikan'ireo mpisolovava niaraka tamin'i Malek , izay nafahana vao andro vitsivitsy talohan'io. Niteny tamiko i Ibrahim tamin'ny telefaonina fa “naniry izy ny handefa hafatra ho an'ny Fiarovam-Pirenena, mba hilaza amin'izy ireo fa tsy hipararetra izy ireo”. Tamin'ny farany, ny faharerahany ihany no nitàna azy tao an-trano.
Saingy mbola manana ny vidiny io laza sy voninahitra vaovao io. Nisy fivezivezezenà hafatra elektronika maro tamin'ireo blaogera miteny arabo nanamarika fa maro tamin'ireo fanehoankevitra tany amin'ny blaogin'izy ireo no sahala amin'ny toa nosoratan'ireo mpiasan'ny SSI. Ary tao anatin'ny fanehoankevitra  iray vao haingana tao amin'ny The Skeptic, nitatitra ny blaogera Ejiptiana iray forsoothsayer  fa henony ireo fampitandremana hoe “eo ampandrafetana fanampenam-bava iray goavana hatao amin'ireo blaogera goavana ny governemanta” avy amina mpampanoa lalàna nàmany.
Raha ny marina, raha toa tokoa ka manao fanampenambava bilaogera noho izay zavatra nosoratan-dry zareo ny ao amin'ny governemanta, tsara ho an'ireo mpmaky amin'ny teny Anglisy n y mitodika mankany amin'i Hossam al-Hamalawy ao amin'ny Arabist.net  hahazo ireo vaovao farany – raha ndeha heverina hoe tsy voasambotra miaraka amin'ireo sisa tavela amin-dry zareo izy ( efa voatàna fotoana fohy  izy nandritra ilay fihetsiketsehana tsy tontosa nanoloana ny paositry ny polisy, izay nidarohana an'i Al-Sharqawi). Nijery akaiky dia akaiky teo i Big Pharaoh  sy Sandmonkey .
Ho famaranana ireo fanadihadiana sy valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, singanina amin'izany ny fifandirana misy eo amin'ny Klioban'ireo Mpitsara sy ny governemanta momba ilay lalàna naverina nodinihana tao amin'ny fahefam-pitsaràna, izay mahakasika ireo andiana hetsipanoherana tato ho ato, lasa any amin'i Baheyya . Jereo ny blaoginy amin'ny fiandohan'ny herinandro manaraka mba hahitàna fanadihadiana lalàna iray mbola tsy navoaka, izay, taorian'ny fahazoana fankatoavana tamin'ny kabinetra, tokony ho nandalo tamin'ireo parlemantera roa raha vao miandoha ny herinandro manaraka. Dia efa andraso ihany koa ny hisian'ny hetsipanoherana maromaro kokoa raha vao manao izany izy : tonga tamin'ny faratampony ireo mpitsara tamin'io volavolan-dalàna io nandritra ny fihaonany tamin'ny minisitry ny Fitsaràna ary nilaza tamin'ny fampahalalam-baovao fa fiovàna fanatsarana endrika fotsiny no ao anatin'io – tena bitika, tsy mahavaly ny fangatahan'izy ireo na ireo fitakian'ireo mpomba azy eny an-dalambe.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/24/119050/
 famotsorana an'i Alaa: http://manalaa.net
 Wael Abbas: http://misrdigital.tk/
 Deutsche Welle: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2015594,00.html
 Washington Post: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/30/AR2006053001178.html
 Araka ny fomba fitondra natao an'i Mohammed al-Sharqawi: http://hrw.org/english/docs/2006/05/31/egypt13482.htm
 efa voatàna fotoana fohy: http://arabist.net/archives/2006/06/01/police-crackdown-on-anti-torture-demo/
 Big Pharaoh: http://www.bigpharaoh.com